#Wasir Geelle: Mucaaradka iyo Siyaasiyinta Waa Saamiley Dawladnimadda wax ku leh - Get Latest News From Horn of Africa
#Wasir Geelle: Mucaaradka iyo Siyaasiyinta Waa Saamiley Dawladnimadda wax ku leh
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay shirkii magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku yeesheen xubnaha ugu badan ee mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya.
Magaalada Nairobi waxaa xubnaha ku shiray ay ka koobnaayeen Siyaasiyiin, Xildhibaano iyo qaar ka mid ah Xisbiyada mucaaradka ee dalka, shirkaas oo ay kasoo sareen qodobo ay ku dhaliilayeen dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Daahir Maxamuud Geelle ayaa jawaab layaab ah siiyay Siyaasiyiinta mucaaradka ee ku shiray magaalada Nairobi, isagoo ku tilmaamay inay yihiin dad saamiley leh oo wax ku leh dowladnimada.
Isaaga oo ka qeyb galay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay xubnaha ku shiray magaalada Nairobi inaysan ku fogaan mucaaradnimada.
Wuxuu wasiirka sheegay in xubnaha mucaaradka looga baahan yahay inaysan orodka ka badin mucaaradnimadooda, haddii aysan ka tanaasuleyn, maadaama sida uu sheegay ay wadaan isku soo dhawaansho shacabka Soomaaliyeed ah.
Daahir Geelle, ayaa ugu baaqay mucaaradka hanka siyaasadeed leh inay la fariistaan dowladda Soomaaliya, islamarkaana laga wada hadlo waxyaabaha la isku hayo.
Sidoo kale wuxuu sheegay inuu ku baaqayo in la fiiriyo danta ummadda Soomaaliyeed oo muddo badan dhibaatooyin kala duwan ku jirto.